Fivoriana tamin’ny Adopteunmec amin’ny lehilahy iray avy ny tanàna amin’izao fotoana izao, mandalo tsara, dia zava-mahaliana ary izany no mahatonga dia vitsy ny fahitana izay dia ifanakalozy hevitra tapaka ny tapa-kazo. Isika hihaona indray hariva, teo amin’ny fisotroana ary rehefa nilaza momba ny fanalan-JAZA ny taloha, ary tsy ny fisamborana ny fanaintainany izy manome ahy ny famerenana. Tsotra loatra aho hoe Nahoana no tsy marina izany, fa araka izay rehetra fotsiny isika hihaona. Ny valiny: Fa toy ny namana na ny tsara. Aho hihaona amin’ny Adopteunmec, ary koa ao amin’ny Facebook. Ny mombamomba azy dia kely foana fa nahoana no tsy. Indray andro dia nanoratra ho ahy ao amin’ny Facebook, herinandro taorian’ny aho nanampy. Omeko azy ny tel, ary tsy tokony hisy ny fanendrena. Izy dia tonga mba haka ahy ho any amin’ny fiantsonan’ny fiaran-dalamby, ny fihaonana voalohany, tsara, dia mihomehy tsara. Izany dia manome ahy dia mampitodika ny zaza ary izy dia mamela ny andro manaraka. Miresaka nandritra ny telo herinandro, ary ho hitantsika ianareo amin’ny faran’ny herinandro. Izaho hahatonga azy hihinana izay tiany. Ny voalohany hariva dia handeha nikela ary ny ampitso maraina, dia mahazo ahy ‘tsy mahatsapa izany eo amintsika sy ny voatery aho ny shank ahy. Izy dia tonga mba hijery ahy ao an-trano, dia mivazavaza tsara, levitra sushi sy ny tsy mandoa ny rangahy. Izaho hahatonga azy hitsidika ny an-trano sy ny farihy, ary dia mamihina ahy imbetsaka. Indray mandeha izy dia lasa, dia nanoratra ho ahy mba lazao ahy dia efa tonga. Fa ny ampitso dia nandefa ahy ny SMS: izany lasa ela loatra, izany dia tsy inona tiako, sns, Uh, mbola azy izay nanoroka ahy tampoka tsy misy. Ary misy azy avy ho ahy toy izany dia vita. Nolazaiko azy OK, ka matetika aho nahita ny toy izany koa ny olona fa samy hafa ny tanjona arakaraka ny toerana (md). Efatra ny toerana, efatra tantara, nifarana noho ny antony mitovy: ny mythos izay churn out dia tena mampiahiahy, tsy maintsy izy rehetra tratra amin’ny Sandoka mombamomba azy, avy eo fa, mazava ho azy, izy ireo no tena fomba ofisialy niaraka tamiko, ary efa mazava ho azy fa mikatona ny tantara, Isika dia miresaka isaky ny alina ao amin’ny toerana efa ho tapa-bolana, sy ny toy izany no tsy toa ny asa fanaovan-gazety ny mifamadika ho zavatra kely kokoa azo tsapain-tànana, dia izaho izay manolotra ny fifanakalozana ny isa. Tonga aho mialoha ny fotoana ary atoa no tara, tsara ny roa minitra hatak andro.
Tsy toy ny mitady ny sariny, na ny marimarina kokoa vao haingana daty, dia manana, fara fahakeliny, efatra na efatra dimy taona. Fa izaho kosa nanapa-kevitra ny tsy aho dimy ambin’ny folo taona, rehefa avy rehetra, izao tontolo izao amin’ny Adopteunmec ny telo mandritra ny fito taona ary efa-bolana dia efa nanao fito fivoriana IRL. Tany am-piandohana aho dia ‘mahafinaritra’, nomeko any ny ody ny ny olona izay tsy toy ny rehetra tampoka, tsara ho ahy io no raisina. Tsy manao izany, indrindra fa eo amin’ny toerana toy ny naze izay ry zalahy tsy misalasala. Nihaona tale mpankahala vehivavy, ny bandy telo-polo taona, izay mitaky anao mivantana ny sary ao amin’ny whatsapp, izany no mahazatra tany an-toerana, ny psycho izay efa tena voan’ny asperger ny, manao toy ny mamadika amin’ny toerana (anontanio ny Facebook aho dia niezaka be dia be ny mampiaraka toerana: Hanaraka ny Lehilahy (izay efa nihaona ny taloha ary efa voatokana, satria ny re-voasoratra ny telo taona taty aoriana, fony aho any ivelany. Fohy), Meetic (fanazavana be loatra ny hianatra, na dia ratsy noho ny fangatahana asa) Arabo lahatsary mampiaraka (izany dia ny spam.) Tinder. Efa tsy nanandrana izany anefa. Swipe ny sisa, swipe ny marina.
Maitso sy tsy masaka
Avy eo dia L. tendrena latinina, tsy be loatra ny sary (ary indrindra ny sary ny orinasa ny alika, ny saka, soavaly, ny akoho, asio tombo-kase. Adinoina fa tsy misy kisendrasendra, pounced Amin’ny fahazoan-kevitra izany dia afaka miasa ‘Hi, amin’ny alalan’ny famakiana ny mombamomba niteny irery aho hoe: ‘izy no manana ny mijery ny tovovavy iray tsara tarehy’. Plus dia mitovy ny vakiteny sy ny tombontsoa eo amin’ny film. Efa namaky ny andian-dahatsoratra iray manontolo ny mpamono mpanjaka, ary izaho ao amin’ny andian-dahatsoratra roa, ny mpamono olona sy ny adala. Aho ny tena marina, tso-po. Izaho tsy mitady ny ara-batana ao amin’ny vehivavy. Ho an’ny rehetra izany, rehefa mihaona amin’ny olona, izay manome antsika ny faniriana ny handeha ho any dia ny lafiny ara-batana, na eo amin’ny na ahoana na ahoana ny zavatra tsapantsika eo amin’ny fahazavana. Mibaboka aho fa sakana
← Inona no zava-te hanambady (toy ny Tandrefana vehivavy) ho amin'ny Arabo olona. Ny Fiarahana Amin'ny Aterineto
Yann Piette Izay mba hihaona amin'ny lehilahy mahafinaritra →